Umatshini wokugaya jikelele we-CNC wolawulo lwe-XK6150HS-TSINFA
Ulapha: Ekhaya1 / Umatshini wokugaya jikelele we-CNC wolawulo lwe-XK6150HS
Umatshini wokugaya we-CNC we-XK6150HS
Lo matshini ungasetyenziselwa zombini ukusila okuthe nkqo kunye nokugaya okuthe tyaba, kunye nokuncamathiselwa okuhambelanayo, inokusila iindawo ezahlukeneyo ezijikelezayo kunye nemijelo, njl. ngee-engile ezininzi kunye nobuso obuninzi ngexesha elinye lokubamba. Sesona sixhobo sokuchwetheza kufanelekileyo kwimizi-mveliso yokwenziwa koomatshini, ukungunda, iimoto nezithuthuthu.
Amandla okubonelela: 200 Set / Sets per Month
Izibuko: Qingdao / Shanghai
1. Ubeko kumatshini wonke wamkela isakhiwo sokuphakamisa inkunzi yegusha, inkunzi yegusha isetyenziselwa intshukumo esecaleni, kwaye iqonga lokuphakamisa lisetyenziselwa intshukumo ende kunye nokuphakamisa.
2. Qwalasela intloko yokugaya yendalo iphela ukuze uqonde ukwenziwa kwezinto ngokubanzi ngokuthe nkqo, ngokuthe tye nangaphambili.
3. Iikholamu zesikhokelo esincedisayo zicwangciswe phambi kweqonga lokuphakamisa, kwaye umgama phakathi kweekholamu zesikhokelo esiphindwe kabini mkhulu, ophucula uzinzo kumatshini wonke.
4. Qwalasela inkqubo ye-CNC kwiindawo zomatshini ezinee-contours ezinzima kunye nemingxunya.
5. I-spindle iqhutywa yimoto ye-servo, idityaniswe nokushenxiswa okuphezulu kunye nokuphantsi kwegiya, umgaqo wesantya ongenasantya kwizixhobo, ububanzi bamandla rhoqo, isantya esiphakamileyo se-torque, iimpawu ezintle zoomatshini kunye nokusebenza okufanelekileyo.
6. Inokuqwalaselwa ngeenkqubo ezininzi ezinje ngokugaya, ukukruqula kunye nokubhola, kwaye isetyenziswa ngokubanzi kumacandelo ohlukeneyo ovavanyo kunye nemifuniselo yokufundisa.
Igama Iyunithi XK6150HS XK6260HS
Ubungakanani betafile mm 500 × 1650 600 × 2000
T Indawo yokubeka 5-18-80 5-18-100
Umgama ukusuka kwimpumlo yokusonta ukuya kwitafile imiz mm 80 100
ubuninzi mm 580 630
Ukuhamba kwetafile Y axis mm 650 650
Umgca we-Z mm 500 530
Taper yokuluka 7:24 2450 7:24 2450
Uluhlu isantya othini Uluhlu ngomzuzu 10 ~ 1600 10 ~ 1600
isikhundla 2, engenanyathelo 2, engenanyathelo
X, Y, Z Uluhlu lokutya m / min 2 2
X, Y, Z intshukumo ekhawulezayo m / min 6/6/4 6/6/4
Amandla aphambili emoto kw 7.5 （11） 11
X YZ Z Torque yeemoto Nm 15 15
ukuchaneka kokubeka mm ± 0.02 / 300 ± 0.02 / 300
Ukuphindaphinda ukubeka ngokuchanekileyo mm ± 0.01 / 300 ± 0.01 / 300
Ubunzima Machine T 4.2 5.5
Ubunzima bokulayisha uMax Ikg 800 1000
NgoMvulo / ngeCawa
Awunazinto kwikowuti yakho.